DIR-300 NRU FIRMWARE - NETWORK NA INTANETI - 2019
Firmware DIR-300 D-Link
Enwere m ike iji ntuziaka ọhụrụ na nke kachasị ọhụrụ na-esi esi agbanwe ngwa ngwa ahụ ma mezie ndị na-aga Wi-Fi nke D-Link DIR-300 rev. B5, B6 na B7
Firmware na nhazi nke onye router D-Link DIR-300
Nbido na ngwa ngwa DIR-300
Ọtụtụ nsogbu na ijikọta router Wi-Fi iji rụọ ọrụ na onye na-eweta ụfọdụ (dịka ọmụmaatụ, Beeline) kpatara site na njirimara nke femụwe. Isiokwu a ga-atụle otú ị ga-esi gbanwee D-Link DIR-300 routers na ụdị emelitere arụmọrụ. Ịkwalite ngwa ngwa ahụ adịghị mfe ma ọ dịghị achọ ihe ọmụma ọ bụla pụrụ iche, onye ọrụ kọmputa ọ bụla nwere ike ijikwa nke a.
Ihe ị chọrọ iji gbanye mgbanaka D-Link DIR-300 NRU
Nke mbụ, nke a bụ faịlụ ngwa ngwa nke kwesịrị ekwesị maka ihe ntanetịime gị. Ekwesiri iburu n'uche na n'agbanyeghi aha aha - D-Link DIR-300 NRU N150, e nwere ọtụtụ nyochaa nke ngwaọrụ a, ngwa ngwa maka otu agaghị arụ ọrụ maka onye nke ọzọ na ị nwere ike ịnweta ngwaọrụ mebiri emebi site na-agbalị, ka ihe atụ, iji gbanwee DIR-300 rev . B6 ngwa ngwa si nyochaa B1. Iji chọpụta nke nyochaghachi DIR-300 gị, ṅaa ntị na akara dị na azụ nke ngwaọrụ ahụ. Akwụkwọ ozi mbụ nke nwere nọmba, nke dị mgbe edechara H / W ver. ha pụtara, ọ bụ naanị ngbanwe nke ngwaike nke ihe ntanetị Wi-Fi (ha nwere ike ịbụ: B1, B2, B3, B5, B6, B7).
Inweta faịlụ DIR-300 ngwa ngwa
Ndozi njikwa maka D-Link DIR-300 NRU
UPD (02.19.2013): saịtị ahụ gọọmenti na firmware ftp.dlink.ru adịghị arụ ọrụ. Firmware download ebe aEnwere m mmasị iji ngwa ngwa ọrụ maka ndị na-eme njem na-eweta site n'aka onye nrụpụta. Otú ọ dị, e nwere ụzọ ọzọ, nke obere obere oge. Iji budata faịlụ ọhụrụ nke ngwa ngwa maka onye ntanetị D-Link DIR-300, gaa na ftp.dlink.ru, wee soro ụzọ: pub - Router - DIR-300_NRU - Firmware - folder with your revision number. The faịlụ nwere ndọtị .bin nke dị na nchekwa a ga-abụ faịlụ nke nsụgharị ngwa ngwa kachasị maka router. Akpa ochie nwere nsụgharị mbụ nke ya, nke ị ga-eyighị ka ọ dị mkpa. Download faịlụ dị mkpa na kọmputa gị.
Melite D-Link DIR-300 na ihe atụ nke rev. B6
Nwelite Nwelite DIR-300 B6
Omume nile aghaghi ime site na komputa ejikọrọ na komputa na eriri, ma obughi ihe ikuku. Gaa na nchịkọta nke nchịkwa Wi-Fi (Eche m na ị maara otú ị ga-esi mee nke a, ma ọ bụ gụọ otu n'ime isiokwu na nhazi nke redire DIR-300), họrọ ihe menu "Hazie aka", wee họrọ usoro - melite ngwanrọ. Kọwaa ụzọ na faịlụ firmware na nbudatara na paragraf mbụ. Pịa "melite" ma chere. Mgbe onye na-agbanye router gaghachiri, ị nwere ike ịlaghachi na nchịkọta ihe ntanetị ma jide n'aka na nọmba ngwa ngwa ahụ agbanweela. Ihe dị mkpa: ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ọ bụla, gbanyụọ ike nke onye ntanetị ma ọ bụ kọmputa n'oge usoro ntanetị, nakwa ka ị ghara ịhapụ netwọk netwọk - nke a nwere ike ibute enweghị ike iji redire na ọdịnihu.
Beist firmware maka D-Link DIR-300
Onye na-eweta Ịntanetị Beeline maka ndị ahịa ya na-enye nkwụnye aka ya, nke kachasị mma iji rụọ ọrụ na netwọk ya. Ihe ntinye ya adịghị iche na ihe a kọwara n'elu, usoro dum bụ otu ihe ahụ. A na-ebudata faịlụ ha onwe ha na http://help.internet.beeline.ru/internet/equipment/dlink300/start. Mgbe ị na-agbanwe ngwa ngwa ahụ na Beeline firmware, adreesị maka ịnweta router ga-agbanwe na 192.168.1.1, aha ebe Wi-Fi ga-abụ ịntanetị-ịntanetị, paswọọdụ Wi-Fi ga-abụ ụbọchị 2011. Ozi a niile dị na weebụsaịtị Beeline.Agaghị m akwado ịwụnye omenala Beeline firmware. Ihe kpatara ya dị mfe: ọ ga-ekwe omume iji dochie anya ngwa ngwa ahụ na onye ọrụ gọọmenti mgbe ahụ, ma ọ bụghị nke ahụ. Iwepu ihe nlekota Beeline bụ oge na-ewe usoro n'enweghị ihe kpatara ya. Site na itinye ya, kwadebe ka D-Link DIR-300 maka ndụ nwere interface site na Beeline, Otú ọ dị, ị jikọọ na ndị ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụghị arụmọrụ a.